Coulda भएका मलाई को बोल — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
उहाँलाई जस्तै शासन गरिएका, तिनीहरूले लाग्छ हामी खाँचोमा परेका fiends
तिनीहरूले मानिसको मा गोली जब म त्यहाँ थिएन
म अवस्थामा समाधान गर्न सक्दैन, छैन भन्न हुनेछ म गर्न सक्ने
तर म एक जवान कालो मानिसको रूपमा जीवन थाह
म केही नबुझेका पागल हुन सक्छ अनुमान गर्न
तर शायद तिमी हुनेछ
मेरो जीवन मा तपाईं देख्यो र यदि तपाईं म उभिए जहाँ उभिए
यी सडकमा हेर्न मेरो आँखा प्रयोग
यो coulda मलाई भएको जस्तै म महसुस हुँदा त्यो अत्यन्त वास्तविक छ
एक किशोर मलाई चित्र
जब मैले देखेको भण्डारमा पेय बाहिर लिँदै
यो कोषाध्यक्ष मलाई देख, त्यसपछि उहाँले चीखें
मेरो हिप मा अंक र मैले देखेको छु मलाई भन्छ
तर पकड, म डरलाग्दो थियो भनेर थाहा छैन
र म एक ब्ल्याकबेरी तपाईंलाई गोली मार सक्छ भनेर थाहा छैन
धेरै अनौठो, उहाँले मलाई एक गर्दनमार रूपमा देखे कि
जब म एक मामला पक्रेको कहिल्यै चाहन्छु, चोरेछ वा लागूपदार्थको किनेको कहिल्यै
वा कसरी म एक शो गर्न उड्यो कि समय पल्ट
आनन्द पूर्ण, एक कोठा मान्छे को पूर्ण लागि finna र्याप
त्यसपछि बाहिर म यो मेरो अनुहार मा एक बन्दूक छ फेला
मेरो हात मा हतकडी, को कमर मा तल PAT
यो नै राजभाषा छ, एउटै राजभाषा
म उनि जान्दछन् कि आपराधिक विवरण फिट
तिनीहरूले मलाई चित्र देखाए, मा आउन
के तपाईँ ठट्टा गर्दै हुनुहुन्छ? हामी एक जस्तो छैन
राम्रो पुलिस लाग्यो तिमी सही देख यदि हामी गरे
मलाई थाहा हरेक काला मान्छे
ती पायो कथाहरू, तिनीहरूले छर्न छ के छैन reaping
जब तिनीहरूले तपाईं जम्प देखि एक गर्दनमार मान
तपाईं एक पंप संग strapped यदि यो कुरा छैन
मलाई थाहा छैन माइक भूरा आफ्नो हात माथि थियो भने हेर
तर म भन्दै homie लिख छु I'ma खडा
र I'ma तपाईं बताउन म यी सडकमा हेर्न महसुस
र यो coulda मलाई भएको जस्तै म महसुस हुँदा यसलाई वास्तविक छ भन्न
खैरो महसुस आकाश, रातो आँखा
कालो र सेतो मतभेद, टाउको माथि बादल
तिनीहरूले हामी भने के कसरी लामो सुने सम्म
कसरी लामो सम्म तिनीहरूले म भने के सुन्न?
सबै असल पुलिस बाहिर कराउँछन्
खराब मान्छे लडिरहेका, राम्रो रोक्दछ बनाउने
म घृणा हुड ब्लक मा
अन्त मा उनि सबै crooks संग तपाईंलाई गांठ कोसिस गर्न सक्छौं
म मेरा सबै जवान कालो मानिसहरूलाई भन्न चाहन्छु
मलाई थाहा हामीले जित्न सक्छौं जस्तो यो महसुस गर्नुपर्छ
तर आफ्नो क्रोध मा पाप छैन
तिनीहरूले के सोच अभिवचन छैन
छैन हामी लायक पायो छैन कसैले हामीलाई भन्नुहोस् गरौं गर्छन्
केही हामीलाई बन्द गर्न प्रयास गर्नेछ तल यो काम छैन
म यसलाई उचित छैन, तर हामी उहाँले ख्याल राख्नुहुन्छ भनेर थाह
र एक दिन उहाँले टाढा आँसु हटाउन छौँ
तपाईंको आशा मा कहाँ? मेरो उहाँलाई छ
तपाईंको आशा मा कहाँ छ? मेरो उहाँलाई छ
हामी के गर्न काम भयो, तर मेरो आशा उहाँमा छ
तिनीहरू पनि गर्न काम पायो, तर मेरो आशा उहाँमा छ
उल्लेख: Coulda मलाई आउनुभएको छ — यात्रा ली
जोर्डन • डिसेम्बर 4, 2014 मा 12:53 छु • जवाफ
म गीत बनेको अंक केही देख्न, र मलाई थाहा यो गीत व्यक्तिगत छ, तर यो जस्तै यो अराजकता मा दिने कि गीत हो महसुस.
को 3rd पदको दोस्रो खण्ड, किनभने उहाँले तल patted बारेमा कुरा “उचित” अपराधी को विवरण. म अघि तल patted गरिएको छ, को को Interstate को लागि फेद भएपछि पक्षमा3माइल, म एक beanie र म शहर को harsher पक्ष थियो जस्तै मलाई हेर्न गरे भनेर एक sweatshirt लगाएका किनभने. बस छैन भनेर, तर म यात्री सिटमा मेरो पिताजी मेरो grandfathers Impala ड्राइभिङ थियो, र तिनीहरूले हामीलाई जहाँ म निश्चित गर्न बन्द मेरी मैकबुक गिरा स्थानीय एप्पल स्टोरबाट फिर्ता शीर्षक बारेमा हाम्रो कथाहरू जाँच. यो रूपरेखा कल, यो कल जो, तर यो मेरो छाला को रंग तर केहि थियो. एक अधिकारी सेतो थियो, अन्य कालो थियो. मलाई थियो.
पहिलो पद को पहिलो लाइन: “कसैले केहिपनि हाम्रो पीडा सुन्न छैन”. राम्रो निश्चित म यसलाई के मतलब थाहा. शब्द “हाम्रो” कि वाक्यांश मा, मलाई गीत देखि अलगाव जस्तै महसुस, जस्तै म सङ्घर्ष हो के छैन बुझ्न, वा तपाईं कसरी महसुस. म बुझ्न सक्षम नहुन सक्छ, तर परमेश्वरले मलाई समर्थन गर्न हालतमा दिनुभयो, प्रार्थना मार्फत.
कि विचार मा जारी, “हामी सबै परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि तपाईंलाई थाहा”. त्यहाँ गीत सारा काउन्टर छ. परमेश्वरले हामीलाई उहाँको छवि सिर्जना, र कुनै रंग, अशक्तताको, लिङ्ग वा राष्ट्रको मूल कहिल्यै उहाँले कुनै पनि फरक सिर्जना कुनै पनि व्यक्तिगत परमेश्वरको नजर बनाएको छ, त्यसैले किन हामी? किन म बाट अलग आफैलाई कुनै पनि हेर्न पर्छ, र विपरित?
म थप प्राप्त गर्न सक्छ, तर म पर्याप्त भने गर्नुभएको महसुस. यात्रा, ख्रीष्टको अनुयायी हामी हाम्रो विश्वास लगाउने, हामी कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि फरक फरक हेर्न छैन वा तिनीहरूलाई फरक व्यवहार. हामी स्वयं फाल्नु, र ध्यान र उहाँलाई मा ध्यान राख्नु, र हामीलाई कुनै पनि कसरी महसुस बिना, हामी भन्न जब हामी मसीहीहरू हुन्, हामी कसरी मान्छे हामीलाई मार्फत उहाँलाई हेर्न प्रतिबिम्बित भन्न हामी कार्य बाटो र कुराहरू. त्यसैले यदि यो तपाईं भएको सक्छ, म अलग तपाईं कुनै पनि हेर्न पर्छ? के यो मेरो थियो भने?
मेरो विन्दु हो, हुन “Colorblind” यो संसारमा.
TORY • डिसेम्बर 4, 2014 मा 10:13 छु • जवाफ
भाइ जोर्डन, म भर्खरै व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ “colorblindness” यी मुद्दाहरू जवाफ छ? मलाई लिङ्ग गर्न दौड चाँडै यसलाई स्विच गरौं. पुरुष र महिला धेरै भिन्न छन्, र एउटा असल कुरा हो! हुनु “लिङ्ग अन्धो” धेरै हानिकारक हुनेछ, किनभने यो स्वाभाविक हाम्रो मतभेद महत्त्व काटेर थियो, र हामीलाई परमेश्वरको बाहिर सम्झना बनाउन. के म मतलब कि भन्ने छ मानिसहरूको, कृपा छैन रूपमा स्वाभाविक यो महिला को लागि गर्छ रूपमा आउन tends (शब्द tends नोटिस!). हामी मात्र मानिसहरू देख्यो भने, हामी परमेश्वरको कृपा बाहिर सम्झना हुनेछ. हामी यसलाई पढ्न हुनेछ, तर कुनै ठोस हेर्न, उहाँको कृपा को मानव उदाहरण (म छु थाहा म आक्रामक generalities बोल्ने छु, तर केवल एक बिन्दु बनाउन).
दौड नै तरिका हो. हामी वास्तवमा धेरै भिन्न छन्, स्वाभाविक! अश्वेतहरुको, एशियाई, सफेद, Hispanics, हामी सामान्यतया हाम्रो worldview धेरै भिन्न छन्, व्यक्तित्व, संस्कृति, आदि. यो एक सुन्दर कुरा छ. अर्को भन्दा एक संस्कृति आवेग देख द्वारा, हामी परमेश्वर भावुक परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने हेर्न सक्नुहुन्छ (सही कुरा बारे भावुक). एक संस्कृति गरेको देख द्वारा “रिस गर्न ढिलो(रास),” हामी परमेश्वरले हामीलाई साथ धैर्य छ कि देख्न सक्नुहुन्छ, र रिस गर्न ढिलो छ. विभिन्न संस्कृति देख द्वारा, हामी वास्तवमा परमेश्वरको धेरै चित्रहरू हेर्न प्राप्त.
प्रश्न बिना, हामी सबै एउटै उपचार गर्न छन्, किनभने हामी विकसित कीट Dei सबै सिर्जना गर्दै. तर, हामी भिन्न छन्, र ठीक छ! म आधा कालो छु, आधा सेतो, र एक टन छ “कालो गुण,” र “सेतो गुण।” ल. त्यो एकदम ठुलो कुरा हो! आशा छ हामीलाई परमेश्वरको बारेमा कुरा देखाउन! म उत्सव लागि मतदान र colorblindness भन्दा मतभेद सिक्दै, र साँचो उत्सव मात्र सुसमाचार मा हुन सक्छ.
नैट • डिसेम्बर 6, 2014 मा 2:45 बजे • जवाफ
तपाईंको शब्दहरू एक विभिन्नता प्रयोग गीत लेख्न तपाईंको शब्दहरू मलाई प्रेरित गरेको छ: “हामी सबै ईमागौ Dei सिर्जना गर्दै, तथापि, हामी भिन्न छन् र ठीक भन्दा बढी छ”. बोल्न र बुद्धि स्पार्क आफ्नो पहल लागि धन्यवाद. गीत बाँकी विविधता र ख्रीष्टमा हाम्रो एकता व्यक्त गर्न शब्दहरू विशुद्ध एउटा असीम उपहार रूपमा नै प्रमाणित गर्न बाहिर गरिएका छ.
ग्रेस र शान्ति,
नैट • डिसेम्बर 6, 2014 मा 2:46 बजे • जवाफ
माफ गर्नुहोस्….*TORY *….छैन Tori.
आकाश-उच्च • डिसेम्बर 4, 2014 मा 10:53 छु • जवाफ
राम्रो जोर्डन भने. म यो एउटा कुरा भन्न हुनेछ: बरु colorblind हुनुको, हामीले यसको सट्टा परमेश्वरको रचनात्मकता हाम्रो फरक जातीय पृष्ठभूमिका देख्न सक्थे? हामी येशूको नाउँमा अन्तर्गत उहाँलाई साथ सँगै खडा. उहाँले हाम्रो ब्यानर छ – कुनै कुरा हामी फर्ग्यूसन देखि हुनुहुन्छ भने, cali, ओरेगन, अलबामा वा न्यूयोर्क. येशूले हाम्रो बिन्दु हो. र हामीलाई मा विभाजन गर्न चाहन्छ कि एक संस्कृति मा “अल्पसंख्यकों” र विभिन्न समूहहरू, हामी ख्रीष्टको शरीर रूपमा खडा, उहाँलाई तल.
तर म गीत मा आफ्नो ज्ञानको मूल्यांकन गर्छौं. उहाँको महिमा अप राज्य निर्माण लागि धन्यवाद!
जोश • फेब्रुअरी 2, 2015 मा 1:09 बजे • जवाफ
यात्रा, यी विचार को लागि धन्यवाद. म आफ्नो सुसमाचारको को लेन्स उहाँको पहिचान र हाम्रो संस्कृति को दुखद राज्य सोच्छ गर्ने रंग को मानिसको रूपमा आफ्नो अनुभव साझेदारी कदर. प्रभु आफ्नो काम उहाँको राज्य र प्रसिद्धि निर्माण गर्न जारी हुन सक्छ. धन्यवाद.
गब्रिएल • डिसेम्बर 4, 2014 मा 2:13 छु • जवाफ
तपाईं यात्रा धन्यवाद, तपाईं साँचो भूमिका मोडेल र प्रेरणा हुनुहुन्छ. असल काममा लागिरहन र प्रभुको निर्देशन मा दुबला.
माइकल • डिसेम्बर 4, 2014 मा 5:17 छु • जवाफ
यो सबै घटना संसारमा अब जा पढेर saddening गर्नुपर्छ. NYC दाँया केन्या. Painfull मुद्दाहरू अझै हामी तिनीहरूलाई सिक्न छैन र नै कुरा गरिरहेको राख्न. यसलाई हामी साँच्चै हाम्रा भाइहरूले keepers भयो समय
माइकल • डिसेम्बर 4, 2014 मा 6:01 छु • जवाफ
यात्रा ली, यो एक फरक समयमा आउन सक्छ. हामी बिन्दु थप जोड गर्न आवश्यक र सबै #couldabeenme अर्थ
Cristella • डिसेम्बर 4, 2014 मा 6:05 छु • जवाफ
तपाईं ब्लग पोस्ट र छोरा लागि यात्रा धन्यवाद
रिचर्ड • डिसेम्बर 4, 2014 मा 7:37 छु • जवाफ
साँच्चै सुन्न दुःखी, अझै पनि साँच्चै y'all महसुस कसरी गर्न कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ तर म कालो PPL धेरै बस छिटो बस साँच्चै प्राप्त देख्न… यू अल लागि दुःखी महसुस, म सबै शक्तिहीन महसुस…
रिचर्ड • डिसेम्बर 4, 2014 मा 7:38 छु • जवाफ
*बस न्याय =
टोड • डिसेम्बर 4, 2014 मा 7:48 छु • जवाफ
शक्तिशाली बयान, सुन्दर तैयार. म कम से कम यो अपेक्षा गर्दा मेरो आँखा वर्ष ल्याए. म भर्खर मात्र आफ्नो संगीत पत्ता र यो परमेश्वरको यो यति ठानेको मेरो जीवनमा समयमा सुन्दर प्रेरणादायक खोज भएको छ. तपाईं धेरै प्रशंसा, जवान भाइ.
लुइस • डिसेम्बर 4, 2014 मा 8:09 छु • जवाफ
यो एउटा वास्तविक मणि छ, यात्रा.
Kish • डिसेम्बर 4, 2014 मा 8:14 छु • जवाफ
यो गीत मनपर्छ! मेरो आशा पनि उहाँमा छ!! हामीलाई पिता मदत!!!
उल्लेख: नयाँ संगीत: यात्रा ली – “Coulda मलाई आउनुभएको छ” |
रबर्ट • डिसेम्बर 4, 2014 मा 9:42 छु • जवाफ
परमेश्वरको विश्वास र राम्रो यात्रा गर्नेगर! तपाईंको ज्योति चम्कोस्.
Amanda • डिसेम्बर 4, 2014 मा 12:51 बजे • जवाफ
रंग unBiblical छ परमेश्वरले देख्न भनेर भन्न. (जोर्डन) बाइबल परमेश्वरको उहाँको बडाई प्रदर्शन गर्न विभिन्न जातिहरूका र अन्य भाषामा सिर्जना भन्छन्. हामी यो अवस्थित छैन बहाना हुँदैन! के तपाईं प्रार्थना वा जो बाटो गरेर यी कुराहरू संग गर्नुहुन्छ जो एक विश्वासीले लागि त्यहाँ हुन चाहनुहुन्छ भन्न भने किन आफ्नो गीत तर्क गर्न खोज्नुभएको? उहाँले आफ्नो दुख साझेदारी छ. आफ्नो पीडा. सामान कि कालो मान्छे, मार्फत जाने. किन उहाँलाई भन्दै लागि तर्किएको महसुस गर्न छ. खराब अनुभव आफ्नो एउटा उदाहरण छन् बाहिर किन शासन वा धेरै कालो मान्छे दैनिक सामना गर्नुपर्ने कि दुख र निराशाले अमान्य गर्छ. केवल एक समय. मेरो श्रीमान् सधैं निश्चित गर्न माथि र बाहिर जाने छ उहाँले मानिसहरूलाई गैर खतरामा पार्ने रूपमा बन्द आउछ!! किन? किन उहाँले कालो छ कि यो छ त त्यो डरलाग्दो र खतरा मानिन्छ. किन मानिसहरू महसुस भनेर स्पस्ट बोल्नु् वार्ता कि यो छ तिनीहरूले टिप्पणी गर्न आवश्यक, वाह तपाईं के म आशा गरिन्छ, वा तपाईं अन्य कालो मान्छे जस्तै हुन्. मानिसहरू सम्म जानुहोस् र तिनीहरू तपाईंले बोल्ने तरिका गरेर हैरानी छन् के? एक मिनेट लागि बन्द र बस मान्छे बाहिर सुन्न, तपाईं सहमत वा बुझ्न छैन. केही सहानुभूति देखाउने र समाधान को एक भाग हुन मद्दत! आफ्नो हृदय यात्रा साझेदारी ली लागि धन्यवाद.
अबीगेलले • डिसेम्बर 4, 2014 मा 1:28 बजे • जवाफ
यात्रा, यो राम्रो छ.
मेरो हृदय चोट छ त्यहाँ अझै पनि यो जस्तै गीतहरू लेख्न एउटा कारण छ किनभने. कालो जीवन को लागि लडाई अझै पनि छ.
शायद एक दिन हामी यसलाई सही बनाउन सक्छ.
हुनेछ • डिसेम्बर 4, 2014 मा 2:44 बजे • जवाफ
राम्रो काम यात्रा जारी राख्नुहोस्! आफ्नो शब्द र आफ्नो साक्षी शक्तिशाली छन्! प्रभु तपाईंलाई आशिष सक्छ, राख्न, तिमीहरूमा आफ्नो अनुहार चम्कने बनाउन!
Tyrone • डिसेम्बर 4, 2014 मा 3:45 बजे • जवाफ
चार्लोट • डिसेम्बर 4, 2014 मा 4:25 बजे • जवाफ
यात्रा ली मानिस,
म सिर्फ म आफ्नो आवाज मा प्रमुख प्रामाणिकता प्रेम हुर्किसकेका छन् कि सक्नुहुन्छ?! आह यो यति कच्चा र वास्तविक छ! यो एउटा ठूलो कमाल छ. ब्रो. धेरै साँचो, म धेरै हावा मा यहाँ देखाइएको छ जसमा भ्रष्टाचार सबै बारे सुन्न saddened छु र यसलाई पूर्वाग्रह र उल्टो यो संसारमा कसरी हुन सक्छ पागल छ – म मेरो आफ्नै दौड मा धेरै निराश जसमा स्टिरियोटाइप र मा प्रसारण गरिएको छ छु. ब्रूकलिन NY देखि भिडियो म लामो समय मा देखेको छु सबै भन्दा saddening कुराहरू एउटै हो.
भिक्टोरिया • डिसेम्बर 4, 2014 मा 4:28 बजे • जवाफ
जोर्डन के भन्दै छ म प्रेम. म एक कालो अमेरिका छु, एक महिला, तर मेरो विचारमा, लिङ्ग एक विशाल भूमिका निर्वाह गर्दैन, कालो महिला संबंधी तरिका पनि लक्षित गर्न सकिन्छ. म कहिल्यै मेरो छाला को रंग लागि व्यक्तिगत लक्षित गरिएको छ, तर म चाहन्छु म घृणा वा मलाई कहिल्यै हानि वा हामी कुरा गर्दै व्यक्तिहरूलाई जस्तै परिस्थितिमा मलाई मार्न थियो कुनै नराम्रो कुरा इच्छा चाहन्छु सोच्न. मसीही हुनुको, म निरन्तर येशूले अन्य गालामा बारी बताउँछ जहाँ पद को सम्झना छु. कसैले तपाईंलाई घृणा भने, तपाईं बावजुद तिनीहरूलाई प्रेम. नस्लवाद कहिल्यै भइरहेको रोकिनेछ, तर कसैले तपाईंलाई आक्रमण यदि, अन्य गालामा बारी. तपाईं जो कोहीले तपाईंले स्वीकार गर्न सक्दैन, यो जस्तै सामान रोक्न छैन जाँदै छ. तर हामी अश्वेतहरुको लक्षित मात्र जाति भनेर सोच रोक्न आवश्यक. मात्र फरक छ, कालो अपराध मा सेतो मात्र अपराध समाचार हुर्केका भइरहेको छ. एक हिस्पानिक हत्या सेतो मान्छे के? वा एशियाली कालो हत्या? हामी सबै उत्तिकै सिर्जना गर्दै. हो, दासत्व सबै कालो मान्छे थियो थियो त्यहाँ एक समय थियो, तर आज दासत्व र नस्लवाद हरेक जाति बीच भइरहेको त्यहाँ. परमेश्वरले यी कालो मानिसहरूको मृत्यु कुनै पनि फरक उहाँले अरू कसैलाई को मृत्यु देख्नुहुन्छ भन्दा हेर्न छैन. म हामी अवधारणा भूल छन् जस्तो लाग्छ, कुनै व्यक्तिको जीवन थप अर्को भन्दा मामलाहरु. र गरेको पनि हामी यी अपराधको को सही तथ्य साँच्चै थाहा छैन कि भूल छैन गरौं. यात्रा, म सबै आफ्नो गीत मा घृणा छैन छु, यो हरेक व्यक्ति आफ्नै राय छ ठूलो छ र यो तपाईंको हो. हुनत, म भन्छु, हो यो तपाईं भएको छु सक्छ, तर यो पनि एक सेतो मानिस भएको छु सक्छ. हामीलाई कालो मान्छे मात्र लक्ष्य छैनन्. का प्रत्येक अन्य परमेश्वरले हामीलाई देख्नुहुन्छ बाटो हेर्न प्रयास गरौं, 100 बराबर प्रतिशत.
Danielle • डिसेम्बर 4, 2014 मा 10:02 बजे • जवाफ
एक biracial रूपमा, रंग अन्धो(हो, किनभने मेरो सम्पदा र संस्कृति पनि विभिन्न जाति समावेश एक समयमा एउटा ध्यान सुरु गर्न. म तिनीहरूलाई कुनै पनि कम मनाउन) महिला म कालो मानिस मार्फत रहेको छ कुनै कुरा कल्पना गर्न सक्दैन. विशेष गरी जब दौड मा सीधा मान्छे हाम फाल्न र यसलाई बाहिर परमेश्वरको छोड्न. तर म खुसी तपाईं परमेश्वरको यो उहाँले पर्छ जहाँ राखे कि छु. उहाँले यो अवस्थामा पर्छ, उहाँले न्याय दिनेलाई रूपमा पर्छ. हामी हौं र उहाँमा भरोसा.
रयान • डिसेम्बर 4, 2014 मा 10:49 बजे • जवाफ
एंथनी • डिसेम्बर 7, 2014 मा 10:20 बजे • जवाफ
म एक कोठा आफ्ना भाइबहिनीको हिजो रुन्छिन् सुन्न प्रयास मान्छे को पूर्ण लागि यो गीत प्ले. बारेमा थिए 18 हामी र 6/8 सेतो थिए. तपाईंको शब्द कुराहरू पुख्ता.
तपाईंको शब्द गहिरो मानिसहरू पुगिरहेका छन् भनेर थाह, सुन्दर तरिका. आफ्नो इमानदार प्रतिबिम्ब लागि धन्यवाद.
जनी • अगस्ट 13, 2015 मा 7:36 बजे • जवाफ
तपाईं आफैलाई बारेमा वा विशिष्ट दौड बारेमा यो गर्दै भने परमेश्वरले के गर्न केही छ. को नस्लवाद मुद्दा किन कुनै एक मात्र तिनीहरूले गरिबी सेतो उपचार कसरी बारेमा रो चक्र परिवर्तन गर्न इच्छुक छ किनभने यसले गर्छ बाटो जारी आफ्नो गीत मात्र देखाउँछ, मेक्सिकन, एशियाली, मान्छे अपराधको Committing र हामी एक रक्षक रूपमा स्वीकार गरेका छन् कसैले रोकेको भइरहेको सबै समय उही तरिकामा मर्न. आफ्नो पूर्ण न्याय वा तपाईं छैनन् या त कुनै राम्रो रेखा वा बहाना छ. तपाईं डर र रिस ल्याउन, ती छैन देवताहरूको अझै तपाईं हुन चयन. तपाईंले यो त G परमेश्वरको राख्नु मसीहीहरूले बरु तपाईं सुनेर त्यसपछि परमेश्वरले लागि सही अडान बनाउने सट्टा आफ्नो हाम्रो गीत आफ्नो gonna आफ्नो नस्लवाद र परमेश्वरको बारेमा TIS गीत बनाउन जा भनेर नस्लवाद लागि खडा भन्न राख्न बस यति. तपाईं मा बस्न सक्दैन2टेबल तपाईं या त तालिका मा बस्न पिता यदि वा Fallen को तालिका मा तपाईं बस्न. तपाईं एक प्रशंसक हराउनुभएको या त बाटो. म डर संग सर्तहरू आउन सक्दैन आशा र साझेदारी आदर र सँगै काम मा डर परिवर्तन हुनेछ सरल आदर कसरी हेर्न. यो coulda तपाईँ यदि, त्यसपछि शायद तपाईं आफ्नो जीवन विकल्प पुनर्विचार गर्न आवश्यक.
जन • अगस्ट 17, 2015 मा 12:00 छु • जवाफ
उहाँले पुलिस विरुद्ध छैन दायाँ? मलाई लाग्छ छैन. म यात्रा प्रेम र आफ्नो अर्को एल्बम सम्म प्रतीक्षा गर्न सक्दैन, जब कि शायद. राम्रो गीत.
उल्लेख: 257 || प्रिय यात्रा ली, मैले सुने – भताभुंग पत्रिका
Kianna • सक्छ 20, 2016 मा 4:30 बजे • जवाफ
म सिर्फ यो गीत सुने र गीत शक्तिशाली छन्. “तपाईंको आशा मा कहाँ?” -यात्रा ली. मलाई मन पर्यो!
मार्क • नोभेम्बर 21, 2016 मा 6:43 बजे • जवाफ
मेरा सबै भाइहरूलाई के, बहिनीहरू, रनभुल्लमा, र चोट. म दु: खी छु. म एक अमेरिकी रूपमा यो अंश हुँ. तर म सुनिरहेको छु. म आफ्नो पीडा सुन्न.
म दु: खी छु.
शब्द बाहिर रही छ. कुनै आलोचना, माया मात्र.
Agen स्लट • मार्च 23, 2018 मा 7:02 बजे • जवाफ
नमस्ते! म यस प्रकारको बन्द-विषय तर म छ
सोध्न आवश्यक. राम्ररी स्थापित ब्लग निर्माण गर्छ जस्तै तपाइँको एक विशाल रकम आवश्यक
काम? म तर म दिनहुँ मेरो डायरी मा लेख्न गर्छन् ब्लगिंग गर्न पूर्णतया नयाँ हुँ.
म मेरो आफ्नै अनुभव साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ त ब्लग सुरु गर्न चाहन्छु
र अनलाइन भावना. कृपया तपाईं कुनै पनि छ भने मलाई थाहा
सिफारिसहरू वा नयाँ इच्छुक ब्लग मालिकहरूको लागि सुझावहरू.